Reuzel - Daily Shampoo | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Cleanse & Wash › Reuzel - Daily Shampoo
Normal Size (350ml) - MMK 49,000 MMK Big Size (1000ml) - MMK 125,000 MMK
--Cleanse | Moisturize | Gentle--
သင့်ရဲ့ နေ့သစ်တိုင်းကို သန့်ရှင်းကြည်လင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့...
Reuzel - Daily Shampoo သည် ဆံပင်အတွက်သင့်တော်သော နူးညံ့မှုနှင့် ပြောင်စင်အောင်ဆေးကြောနိုင်စွမ်းတို့ကို မျှတအောင် အချိုးကျထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပြီး၊ ဆံသားထိခိုက်ခြောက်သွေ့ခြင်းများမရှိစေပဲ သင့်ဆံသားကို တောက်ပြောင်သန်စွမ်းစေမည့် ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်အမျိုးအစားများအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ဦးရေပြားနူးညံ့သူများ၊ ဗောက်ထတတ်သူများအတွက်လည်း အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အားပြည့်၊ လန်းဆန်း ခွန်အားပေးမဲ့ သင်းပြံ့သော Peppermint ပူရှိန်းရနံ့ပါဝင်ပြီး၊ Reuzel ရဲ့ Signature Key Ingredients ဖြစ်တဲ့ T-4 Tonic Blend တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ Witch Hazel Extract, Nettle Leaf Extract, Rosemary Extract, Horsetail Root Extract အစရှိသည်တို့က သင့်ဆံသားနှင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ လိုအပ်သော အစိုဓာတ်များကိုဖြည့်တင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reuzel - Daily Shampoo ကို Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြပါတယ်။
မျှတသော နူးညံ့မှုနှင့် ပြောင်စင်အောင်ဆေးကြောနိုင်မှု
Oil-Based Products များကိုပြန်လည်ဆေးကြောရာ အဆင့်သုံးဆင့်၌ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်
Oil-Based Product များအား Degrease လုပ်နည်း
Want to start every day fresh? Here you go, friend.
Reuzel - Daily Shampoo cleans without stripping, balanced for effective wash-off while retaining moisture. It smells great and it’salight, bright, invigorating wash concocted from Reuzel's special blend of natural extracts. This includes the Signature T4 tonic blend of natural witch hazel, nettle leaf, rosemary and horsetail root extracts which will leave you withastronger, shinier head of hair.
This Daily Shampoo is - as the name tells - made for daily usage and because of its cooling feature and its fresh scent of peppermint it givesafreshness boost and ensuresagood start in the day.
Put it on wet hair, lather it up and rinse it away. Follow with Reuzel - Daily Conditioner forasilky smooth hair. Or, if you’ve got some serious product build up, you can use this after Reuzel - Scrub Shampoo to wash any last grease down the drain.
Balanced for effective hair cleansing and gentleness
Final step in the 3-steps method of Oil-Based Products degreasing
From MMK 51,000